Xildhibaanada baarlaamnka Soomaaliya oo mar kale gacan ka hadal uu ku dhexmaray Muqdisho. – Radio Daljir
Xildhibaanada baarlaamnka Soomaaliya oo mar kale gacan ka hadal uu ku dhexmaray Muqdisho.
Muqdisho,Dec,21 -Xildhibaano katirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta gacan ka hadal uu ku dhexmaray xarunta Golaha Shacabka ee Muqdisho ,kadib markii ay xildhibaano taageersan afhayeenka baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan ay ku buuqeen fadhi ay lahaayeen xildhibaanadii sheegay inay xilka ka qaadeen gudoomiye Shariif Xasan.
Xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo ka mid ahaa xildhibaanadii xilka qaadista ku sameeyey afhayeenka baarlamaanka Shariif Xasan oo u waramay Radio Daljir isagoo ku sugan hoolka baarlamaanka uu ku shirayaay,ayaa waxaa uu sheegay kulankii ay ku lahaayeen xarunta Golaha Shacabka inay la xiriirtay sidii baarlamaank uu u ansixin lahaa gudiga qabanqaabada doorashada ee gudoomiyaha baarlamaanka.
“Xildhibaanada waxaa ay lahaayeen fadhi kusaabsan qabanqaabada gudiga doorashada,waxaana ay isku raaceen in gudiga doorashada uu soo magacaabo gudoomiyaha baarlamaanka kmg xildhibaan Madoobe Nuunow Maxamed,intii kulanka uu socday taagerayaasha Shariif Xasan ayaa nasoo weeraray oo buuq ku bilaabay fadhigii maanta, kadibna gacan ka hadal ayaa meesha ka dhacay”ayuu yiri Xidlhibaan Cabdiladiif Sanyare.
Khilaafka u dhaxeeya xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa todobaadkan gaaray meeshii ugu xumayd kadib markii xildhibaanada qaar ka mid ah ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen afhayeenka baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Afhayeenka baarlamaanka Shariif Xasan ayaa dhankiisa horay sharci daro kutilmaamay talaabadii xilka qaadista ee baarlamaanka,waxaana gacan ka hadalkii maanta uu kusoo beegmayaan xilli madaxda ugu sareeysa dowladda faderaalka ay ku suganyihiin magaalada Garoowe oo ay uga qaybgalayaan shirka lagu wado inuu saacadaha soo socdo uu ka furmo magaalada Garoowe.